पहिरोमा पुरिएकी बालिकाको शव भेटियो , शोकमै डुब्यो गाउँ ! – My Blog
No Comments on पहिरोमा पुरिएकी बालिकाको शव भेटियो , शोकमै डुब्यो गाउँ !
रसुवा – रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका ५ कोलडाँडामा पहिरोमा परि बेपत्ता मध्ये एक बालिकाको शव भेटिएको छ । पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता रहेकी ११ वर्षीया सोकिता गलानको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी नायव उपरीक्षक देवेन्द्र पाण्डेले बताए ।
नुवाकोटबाट थप उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर काठमाडौँ लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय खटिएका छन् । फोटो फाईल
← पढन जापान पुगेका महेन्द्रनगरका कुवेर धामिको सुतेकै अवस्थामा मृ’त्यु ! → सैन्य विमानको टायरमा बसेर भाग्न खोजेका उनीहरु उड्दै गरेको विमानबाट ख सेका मध्य एक राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी !